Daawo:- Buuhoodle oo looga diyaar garoobay xuska Maalinta Qashinka SSC ee 18ka May + Shacabka oo fariin udiray Somaliland.
May 17, 2019 Xafiiska Puntland Faallooyinka, Maqal Iyo Muuqaal, Puntland, Somalia, Wararka Maanta, Wararka Puntland iyo Somaliland 20
Marka la joogo Gobollada SSC ama Sool Sanaag iyo Cayn maalinta 18ka May waxaa loo asteeyay maalinta Qashinka Gurka ama maalinta nadaafadda waxaana sanad waliba maalintaasi shacabka Gobolladaasi ay sameeyaan olole balaaran oo nadaafadeed.
Maalinta Birri ayaa lagu wadaa in ay noqoto maalinta qashinka gurka Gobollada SSC waxaana hadda magaalada Buuhoodle laga dareemayaa diyaar garoowga xuska maalintaasi.
In taariikh xun la isku qabqabsado waa macno daro runtii. Xaqiiqada dhabta ahi waxaa weeyaan in uu caalamku ka shaqeeyo xeerar, shuruuc, shuruud iyo qawaaniin haga nidaamka dawliga iyo dhaqaalaha dunida. Sida ay intaasu wada qeexayaan Jamhuuriyadda Soomaaliya midnimadeedu waa muqaddas la ma taabtaan ah. Gorgortan ma leh.
Sida taariikhda Soomaaliya ka cad siyaasiyiinta Isaaq waxay siddeetamaadkii soo jeediyeen talada ah in hannaanka dawliga ee Soomaaliya lagu baddalo mid geyiyada iyo qabiilooyinka deggan u saamaxaya nooc ismaamul hoose ah laakiin se ay mindimada qaranku sideeda u sugnaato. Ilaa iyo intii ay SNM garabkeeda hubeysani shirkii Burco ku afduubtay mawqifka Isaaqu kaas uun buu ahaa runtii. Marka loo sii dhabba galo fikirkoodaasi hore waxuu ahaa mid federaalismka hadda lagu dambeeyay ku talinaya ee sababta ay uga boodsan yihiin ayaa ah mid salka ku haysa khayaalka ah Isaaq geyigan ha ka taliyo oo u taliyo.
18ka May sida ay SNM-tu u duuliso waa been abuur ay 1991kii kooxdeeda hubeysani qori caaraddii kaga saxiixatay issimadii iyo cuqaashii beelaha ee shirka Burco ku saxiixi rabay nabadeynta geyigan iyo ismaamul hoose ilaa ay dawlad qaran ka dhalan doonto Xamar. Waxaa istusay kol haddii ay dawladdii burburtay hubka woqooyi gacanta ku dhiga oo fursadda uga faa’iideysta in Isaaqu geyigan xoog iyo xeelad ba uga taliyo oo ugu taliyo.
Qaddiyad fashil ku dambeyn doonta ayay awalka hore ba ahayd ee aan baalal yeelan karin waayo beelaha kale ee geyiga, Soomaalida guud iyo beesha caalamku ba ma aha saqajaanimo ay mar na oggolaan kari lahaayeen sida haatan ba caddaatay. Dalkani ma qaybsamayo ee waxay dantu noogu wada jirtaa in aynu waaqiciga dhabta ah haybsano.
Xaqiiqada dhabta ahi waxaa weeyaan in uu caalamku KU shaqeeyo xeerar, shuruuc, shuruud iyo qawaaniin haga nidaamka dawliga iyo dhaqaalaha dunida
Mudane cagjar says:
Mr Taajka puglan
wataq wataq yaanay kaagaga bixine runta kahadal sxp
Berri waa in aan gurigayga nadiifiyaa.reer Buuhoodle rag rag dhalay.
Waa maalinta Condomku iibsamo
Hanoo nadiifiyan dhulka ileen baray marayaan ciidankii barakaysnaa ee jsl
Gobtu markay dabaal degeyso, guntu xashiishka ayay xaadhaa. Kkkkkkkkkk
Gobtu maalintey farxad iyo reyn reyn ku munaashaqooneyso guntu oohin iyo calaacal ayay baraha bulshada lasoo fadhiistaan. Kkkkkkk
Salaan Sare iga gudoon ind. Happy May 18.
Si wanaagsan iigu dabaaldeg sxb.
Dadka caafimaadka qaba markeey ololaha nadaafada ku mashquulsanyihiin inta madaxa looga jiro ayaa dabbaaldegta! Yaa Ilaahii Yaacaafi yaa shaafi amiin.
Dr Cawad iyo inta kale ee mirika qabta salaamullahi afur wanaagsan.
Zxb caawa magaldaydii waan ka dabaldagayna zxb jaliyadii oo midaysan ayaa barina xafladaynaysa,kkkkkk
Ahmed zxb hapy 18may
Waxan ku faraxsanahay sida ay jiilasha yaryar ee soo kacay ay u xusayaan igawaloon ubaqanayn,kkkkkkkk
@ Boqoradda Harti Salaan Gobeed,
Waa runtaa oo gobtu ayaamo jira oo sugan ee ama diinta ama taariikh sugan mise waddan rasmi u jira lagu xuso ayay u dabbaal dagtaa.
Guntu se dal aan jirin iyo maalin aan jirin iyo taariikh aanay lahayn bay xustaa oo dhimirka iyo laabta ayay la’yihiin.
Saqiirada sidooda in mar ba la soo celceliyo ayay dantu khasabtay.
Cid idiin ma jirto ama xaarka is maydh ama kilnka qabo ama hashaada raaca adaan isku mashqualin ogown cidaa wax Kalama maqnid
18th may waa maalin aad ugu weyn umada soomaaliyeed waa maalinta loo asteeyey Qashinka iyo wasaqda layska fogeeyo Qashinku intuu kuu jiro baa xanuunku kuu jiraa
Masha Allah Buuhoodle qurux badanaa ciideedu Allaha Barakeeyo aamiin.
anigu xalay baan condomkii iibsaday intuusan maanta qaaliyoobin
Waa dad wanaagsan, maalmaha kale ee sanadka Qashinka way dhex seexdaad ,cunaan 18 may marka la gaadho dabaaldega ayay iska nadiifiyaan .
Somalilander nimmadu waa ka dhab.
Maalmaha kalae ee sanadka Qashinka dhex seexda , oo cuna maalilanta dabaaldaga 18 may nadiifiya wadooyinka oo maydha.
asc dr Cawad iyo intaa caafimaadka usaaxiibka ah waa idin salaamay
kkkkkkk waxaa iga qosliyey “qashin qubkii Laascaanood beey ciidan soo dhigeen” dr Cawadoow wallahi waa worry situations xaalku idinkana wax kalaad kahadleeysaan!kkk